Dhacdo.com - News: War deg deg ah hugunka sawaxanka madaafiicda cul culus oo iminka la'isku garaacaayo magaaladda Muqdisho
14,450,097 unique visits
War deg deg ah hugunka sawaxanka madaafiicda cul culus oo iminka la'isku garaacaayo magaaladda Muqdisho
Dagaal xoogan ayaa iminka ka qarxay magaaladda caasimadda ah ee Muqdisho, iyadoo warar is-khilaafsan ay kasoo baxayaan cidii soo qaaday, wuxuuna iminka ka soconaayaa degmooyinka Hodan iyo Hawl Wadaag.
Dagaaladaan ayaa waxay daba socdaan dagaal xoogan oo ay saaka soo qaadeyn ciidamadda dowladda, kuwaa oo horumar aanan buurneyn ka sameeyay degmada Hodan.
Dagaalka xoogiisu ayaa wuxuu ka soconaayaa, Taleex, K.P.P iyo wadada dheer ee Tartuunka, iyadoo ciidamadda Amison ay duqeyn ba’an halkaasi ku wadaan.
Sidoo kale waxaa jira madaafiic xoogan oo kusoo daadanaaya degmadda Hawl Wadaag, iyadoo ay saameyn balaaran ku yeesheyn dhaq dhaqaaqa oo Suuqa Bakaaraha oo iminka laga sii hooyanaayay.
Wixii warar ah ee kusoo kordha waxaa kusoo qaadan doonaa Nagala Soo Xiriir dhacdo@hotmail.com ama dhacdo@gmail.com
New York on July 27 2010 18:22:56 ·
0 Comments · 857 Reads